Obama: Waan dilnay hogaamihii Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Obama: Waan dilnay hogaamihii Alshabaab
6th September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Mareykanka Brack Obama ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu dileen hogaamiyihii Alshabaab, Axmed Cabdi Godane, wuxuuna dilkaas ku tilmaamay mid ka dhigan burburinta Alshabaab.
Obama oo hadda kusugan dalka Ingiriiska gaar ahaan gobolka Weles ayaa waxa uu halkaasi kaga qeyb galayaa Shir NATO leeyihiin waxaana uu ka hadlay Geerida Hogaamiyihii Ururka Al Shabaab Axmed Cabdi Aw Maxamuud (Godane).
Madaxweyne Obama ayaa sheegay inay doonayaan ka dhabeynta ama ka miro dhalinta Hadafkooda oo ah sidii ay AL Qaacida uga tir tiri lahaayeen Caalamka waa sida uu hadalka udhigaye.
Waxa uu Obama sheegay inay ku rajo weyn yihiin inay bur buriyaan Kooxda ISIS (Kooxda Daacish) ee ka dagaalanta dalalka Suuriya iyo Ciraaq sida loo bur buriyey buu yiri Al Shabaabkii Somaliya oo Hogaamiyahoodii Godane la dilay.
“Waxeynu daneynaa inaan burburino Kooxda IS ee Suuriya iyoi Ciraaq sida aan u burburineyno Alshabaab-ka Soomaaliya oo diyaaradaheena dagaalku hogaamiyihoodii ku dileen Soomaaliya” ayuu yiri Obama.
War qoraal ah oo kasoo baxay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in saraakiil ka tirsan sirdoonka Maraykanku ay xaqiijiyeen dhimashada Axmed Cabdi Godane oo lixdii sano ee lasoo dhaafay ahaa hoggaamiyaha sare ee Ururka al-Shabaab oo isagu qayb ka ah Ururka al-Qaacida.
Xarkada Alshabaab ayaan ilaa hadda ka hadlin dilka la sheegay in ciidamada Mareykanku gobolka Shabeellaha Hoose ugu geysteen hogaamiyaha Alshabaab, Axmed Cabdi Godane.
Ciidamada Amaanka Soomaaliya oo heegsan sare la geliyey (Maxaa soo kordhay?)